Xog dheeri ah oo kasoo baxeysa qaabkii loo dilay Osama. - Wargeyska Faafiye
Ilo xog ogaal ah oo katirsan kooxdii fulisay dilkii Osama Bin Laden, ayaa sheegay in Osama ay An undated recent file picture shows Osama Bin Ladku dhacday ilaa 100 Xabo oo Rasaas ah.
Warar sir ah oo laga helay kooxdaan fulisay weerarkaas, ayaa sheegaya in Osama Xabadaha badan ee lala dhacay ay sababtay in la qariyo meydkiisa ama sawiradiisa.
Labo kamid ah ciidamadii Howlgalkaas fuliyay, ayaa xaqiijiyay in Osama dhowr rasaas lala dhacay, iyadoo mar walbana la hubinayay inuu dhintay, taas ayaana lagu sababeeyay in Mareeykanka Meydkiisa ay ku duugaan Badda.
Madaxweyne Obama iyo Maamulkiisa oo markii uu falka dhacayay ka daawanayay shaashadaha, ayaa go’aan ku gaaray in la qariyo meydka Osama, si aysan Al-qacida ugu adeegsan dicaayada ama aargudsasho u sameynin.
Filed in: .Warka, Faafiye Latest news. Tags: Dilka Osama
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsInter Milan sack coach Claudio Ranieri after poor runGolihii adeegga garsoorka Soomaaliya oo la kala diray.Xildhibaan Dalxa oo ka badbaaday isku-day dil.7 caruur oo bam ku dhimatay.Duqeyntii ka dhacday Kismaayo.